All Registered Voters in Multnomah County Should Have Received Their Ballots - Somali | Multnomah County
Dhammaan cod-bixiyeyaasha la diiwaan galiyay ee Degmada Multnomah waa in ay helaan waraaqahooda codbixinta maanta gudaheeda, oo ah Maajo 7, 2020. Cod-bixiye kasta oo ku sugan Degmadda Multnomah oo aan haysan warqad cod-bixin oo loogu talagalay doorashada 19-ka May ee xafiiska degmada ayaa wac 503-988-Vote (8683).
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ku dhiirigelinayaan cod bixiyayaasha inay ku codeeyaan boostada maxaa yeelay waa habka ugu aaminka badan ee lagu codeeyo. Looma baahna shaabadda boostada waraaqaha lagu soo celiyo.
Dhammaan cod-bixiyeyaasha la diiwaan galiyay ee Degmada Multnomah waa in ay helaan waraaqahooda codbixinta maanta gudaheeda, oo ah Maajo 7, 2020.
Multnomah County waxay kula talineysaa codbixiyeyaasha inay boostada ugu diraan warqadooda codbixinta kahor May 14-keeda, 2020. Wixii ka dambeeya 14-ka May, waxaan kula talineynaa cod bixiyayaasha inay ku soo laabtaan codbixinta sanaadiiqda codbixinta ka hor 8-da fiidnimo ee 5/19/2020. Codbixiyeyaashu waxay ku soo celin karaan codkooda maktabadda dadweynaha. Maktabadda, isticmaal sanduuqa soo celinta buugga. Adeegso khariidadan si aad u hesho santuuqa codbixinta rasmiga ee kuugu dhow iyo goobta maktabadda: multco.us/dropsites
Doorashada Horudhaca ah ee Maajo 19, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay Gresham ka fureen goobo dheeraad ah. Xarunta Codaynta Degdegga ah (Voting Center Express) (VCE) waa ay furan tahay Abriil 27 ilaa Maalinta Doorashada oo ah Maajo 19. VCE waxa ay ku taalaa Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah 600 NE 8th Street bartamaha Gresham.
Cod-bixiyeyaashu waxa ay iska badali karaan waraaq codbixin oo luntay, waxay heli karaan caawimaad codaynta ah, waxay weydiin karaan su`aalo, ama waxay toos ugu codayn karaan Xarunta Codaynta Degdegga ah. Waraaqaha codbixinta kaliya waxaa laga aqbali karaa Xarunta codaynta Degdegga ah inta lagu guda jiro saacadaha shaqada. Goobta sanduukha waraaqaha codaynta la dhigo ee rasmiga ah ee 24ka saac furan ee kuugu dhow waa qaybta baabuurta la dhigto ee Maktabadda Gresham 385 NW Miller Avenue. Adeegyo codbixiye oo badan ayaa lagu dhammaystiri karaa khadka internet-ka. Wixii su`aalo ah, fadlan wac 503-988-VOTE.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay siinayaan tarjumaan, bilaash ah, qof kasta oo ugu baahan caawimaad codaynta ah luuqad aan Ingiriis ahayn. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka kuna qoran sagaal luuqadood yaa khadka internet-ka looga heli karaa multco.us/VEOLang.
Waraaqha lagu codeeyay ee Doorashada Horudhaca ah ee Maajo 19 waa in la helaa marka la gaaro 8:00 fiidnimo, Maajo 19, 2020. Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan doorashada, fadlan bookho www.mcelections.org.